KU RAKIBIDA SILSILAD FARTA LAGU XIRO, SIDA LOO SAXO OO LOO EEGO XIISADDA - MISHIINADA GAARKA AH
Ku rakibida silsilad farta lagu xiro, sida loo saxo oo loo eego xiisadda
Haddii aad haysato qalabka guriga, waa inaad ogaataa in daryeelka gaarka ah loo baahan yahay. Waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo nadiifiyo oo lagu xiro silsiladaha, si loo nadiifiyo sifooyinka hawada, saliidda iyo taayirrada. Iyo, dabcan, waxaad u baahan tahay inaad la socotid xiisaha silsiladda, sida xiisad hooseeya waxaa jira khatar ah inaadan waxyeelleynin sawirka, laakiin sidoo kale caafimaadkaaga haddii silsiladda xawaaraha sare ay duqeeyaan.
Noocyada siriyeyaasha qalabka
Qaybta ugu muhiimsan ee gaasku waa sawir gaasta. Qalabka ugu casriga badan, mashiinku wuxuu yahay silsilad kaliya. Qaboojinta hawada, nidaamka laba-ciribtirida piston. Saliidda noocyadan kala duwan ayaa si toos ah loogu daraa shidaalka, dhammaantoodna waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in shidaalka si joogto ah loo dhaqo karraaniga. Saamaynta saliidda gaasku waxay ku kala duwan tahay 1:20 ilaa 1:50 iyadoo ku xiran tahay soo saaraha shidaalka.
Qalabka hawada ee maraakiibta shidaalka ayaa leh door muhiim ah. Wuxuu u baahan yahay nadiifin joogto ah. Haddii loo oggolaado in si culus loo sumoobo filterka, boodhka ka soo baxa wuxuu si toos ah ugu dhici doonaa nidaamka pistiska, taas oo horseedi doonta qalalaasida.
Haddii filterka la xiro, sawirka wuxuu lumiyaa xajintiisa, mashiinka wuxuu bilaabmaa inuu kululaado, taasina waxay keeni kartaa in uu gubo biinanka.
Ma taqaanaa? Bilawga soo saarista boodhada shidaalka waxaa loo tixgeliyaa dhammaadka 1920s. Silsiladaha ugu horreeya waxaa soo saaray Stihl.
Bilowga maasuuda baaskiiladu waa xadhig leh caarad, oo aad jiideyso oo aad baabuurka ku wado. Markaad xadhigga ku jiido, ilkaha ayaa xajinaya ratchet, duufaanku wuxuu bilaabmaa inuu furo.
Dad badan ayaa ka cabanaya in ay qaadato wakhti dheer si ay u xoqdo xadhig si ay u bilawdo mishiinka. Waxay kuxirantahay haddii uu yahay mid sax ah. Haddii carburetor uu siiyo isku dhafka cad ee saliidda iyo gaasta, markaas dhibaatooyinka waa inaysan kicin.
Habka shaqo ee ugu weyn - jees jeeso.
Silsiladda waxay ka kooban tahay saddex nooc oo ilkaha ah: hogaaminaya, jarista iyo isku xirnaanta. Waxay ku xiran yihiin rookets. Ilkaha jarista waxay ku yaalaan labada dhinac: midig iyo bidix.
Zanzibar waxay u qaybsan yihiin laba nooc: farshaxan sare iyo muuqaal hooseeya. Nooca ugu horeeya waxaa ka mid ah silsiladaha, kuwaas oo ilkaha lagu dhejiyo farqiga weyn, tan labaad - oo leh farqi yar. Sidoo kale, silsiladaha waxay ku kala duwan yihiin dhumucda qiiqa iyo dhererka isku xirka. Silsiladaha fargeetka ah ee ku xiran taayirka, taas oo u hogaaminaysa jihada saxda ah. Dhammaadka daboolka ayaa leh khad toos ah oo haya xiriirka oo u oggolaanaya silsiladda inay rogto. Dhinaca hore ee taayirku waa dhuxul dusheed. Silsiladda oo ay weheliyaan taayirada waxaa loogu yeeraa dharkhaan, maxaa yeelay waa qaybo goosane ah ee silsilad.
Waa muhiim! Haddii carburetor si sax ah loo hagaajiyo, ka dib markaad bilowdo gawaarida sawirta, waxaad ku qasbanaan doontaa inaad xoqdo xargaha bilowga ah muddo dheer.
Sawirka gaasku wuxuu heystaa habka tamarta saliidda ah. Duufku wuxuu keenaa saliid, kaas oo dhoobada ka dibna soo nuugo. Haddii sawirku idil yahay, saliidda ayaa la joojinayaa.
Waa maxay sababta silsiladdu u duushahay, ogow sababta
Haddii aad isweydiineyso sababta silsiladku uga baxayaan fooshaada, markaa waxaa jira dhibaatooyin xagga farsamada. Waxaa jira saddex sababood oo waaweyn Dhibaatadani: Hawlgallada aan fiicnayn ee taayirada, oo fidisa silsiladda iyo daaqada aan fiicnayn. Aan u fiirsano si faahfaahin dheeraad ah mid kasta oo ka mid ah sababaha suurtogalka ah ee ku fashilmay
Marka dhibaatooyin la yimaadaan taayirka markasta had iyo jeer daciifnimo ayaa fidsan. Badanaa dhibaatadani waxay ku dhacdaa meesha ay ku xiran tahay taayirka.
Meeshani waxay ku taallaa dusha sare ee saxanka dibedda ah, oo ku yaala caarada silsiladda silsiladda iyo saxan gudaha ah, oo ku yaala barxadda. Calaashka wadajirka ah ee dusha sare waxaa lagu xardhay guntin. Buurtan waxaa loogu yeeraa "mashiinka mashiinka." Rugta duurjoogta iyo taayirada dusha ayaa lagu ilaaliyaa daboolyada gaarka ah.
Haddii xadhkaha la xirxiray way furmeen, daalku wuxuu bilaabmaa inuu dhaqaaqo ama qalooca. Haddii finanku ay xaalad fiican ku jirto, xiisadda silsiladu waa inay noqotaa mid caadi ah. Kadib markaan jimicsiga, waxay socon doontaa ugu yaraan shan maalmood oo shaqo ah iyada oo aan lahayn jilbaha. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u xejisid xarkaha dusha sare leh.
Ma taqaanaa? Magaalada Nora, oo ku taala Kanada, waxay leedahay farsamo sare oo horumarsan. Dhammaan jidadka iyo xaglaha magaaladan ayaa lagu qurxiyey alaabooyin ay abuurtay silsilad fara badan.
Si aad u fahamtid sida loo xakameynayo silsilad ku taal silsilad, marka hore waxaad u baahan tahay hel oo hoos u dhig jabka biriijka. Kursiga murugada ayaa ku yaal meel u dhow taayirada, waxaa loo rogay ilaa silsiladda ay ku soo baxdo dusha. Ka dibna jeebka ku jiid jihada saacadda ah. Haddii aysan dhaqaaqin, markaa waa in si yar loo daboolaa adoo isku dayaya in xeeldheertaada ku xirto jihada kale.
Mindhicirku wuu fidsan yahay
Haddii silsiladdaada ay ku dhegto silsilad, ka dibna tani waxay muujinaysaa cillad ka mid ah farsamooyinka qaar, mid ka mid ah doorashooyinka waa in la xidho silsiladda lafteeda.
Waqti ka dib, biraha waa la bedelay, silsiladuna waxay noqotaa 0.5-1 cm dheer. Waxaa ugu wanaagsan in la tirtiro dhibaatadan adoo iibsanaya silsilad cusub, laakiin waxaa jira hab laguugu soo celiyo gadaashii hore. Khabiiradu waxay yiraahdaan waa mid aad u adag oo aan suurtagal ahayn, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa sida guriga loogu sameyn karo.
Taas awgeed u baahan tahay:
mashiinka alxanka korontada (ee aan looga baahnayn kiisaska oo dhan);
Silsiladaha caadiga ah ee silsiladaha ayaa laga sameeyaa bir adag, sidaas darteed way adag tahay in la kala furo. Kala saar silsiladda gudaha gudaha naqshadda, kaas oo u adeega sidii qalab isku xira.
Si aad u bilawdid, silsiladda waa in lagu hagaajiyaa ku xigeenka, ka dibna si tartiib tartiib ah u xoqa qaybta kore. Waxaad u baahan tahay inaad foorarsato fayl ama faylka. Laguma talinayo in la isticmaalo Booqday, sababtoo ah waxaa jira halis ah in waxyeelo qaybo ka mid ah xiriirada. Ka dib markii laysku googooyey garaashka gadhka. Mishiinka lafdhabarta waa inaan la tuurin. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad hesho bedelaad. Badeecadaha boodhada gaaska ma keenaan qaybo shakhsi ah silsiladda, maaddaama aysan ku fikirin in macaamiisha ay hagaajin karaan silsiladda laftooda. Si aad naftaada u sameyso naqshad cusub, waxay u badan tahay, inaad ku guuldareysato, markaa waa inaad rakibtaa midda hore.
Si loo soo gaabiyo silsiladda, waxaad u baahan tahay inaad kala qaybiso laba meelood. Laakiin xusuusnowin tirada hagaha ee dhinaca hoose ee silsiladda iyo masaafada u dhexeysa waa in lagu daraa ilka hore.
Waa muhiim! Markaad xirtid xiriiriye, u dhig hadaad ugu yaraan qiimaha ugu yar. Soo saar electrode leh dhexroorka ugu yar, sidaa daraadeed ma taaban doontid xiriirada ku xiga.
Kadib markaad ka saarto hal ama dhowr xiriiriye (iyada oo ku xidhan heerka heerka silsiladda), silsiladaha ayaa lagu xiri karaa. Waxaan isku xirnaa rinjiga qadiimka ah, adigoo si adag uugu cadaadinaya dhinacyada.
Marka xigta waxaan u baahan nahay mashiinka alxanka. Rivet waxay u baahan tahay in ay xirto dhinaca dhinaceeda. Taas ka dib, waxaan qallajineynaa dheellitirka, kaas oo la sameeyay inta lagu jiro alxanka. Silsiladda waxaa loo tixgelin karaa mar labaad.
Si aad u dalbato xayndaab xagaaga xagaaga wuxuu caawin doonaa gawaarida cawska iyo gaasaska.
Dabiiciga hogaaminaya ee adag
Mid ka mid ah doorashooyinka suurtogalka ah ee silsilad fudud ee qalabkaaga - mushkilad la xiriirta xiddigta. Inta badan, wax walba way dhacaan maxaa yeelay xiddiggu waa dabacsan yahay. Hadda waxaan kuu sheegi doonaa sida loo hagaajiyo xiddigta saxda ah, ka dibna silsiladda saar.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ka qaaddo daboolka difaaca ee mashiinka. Marka xigta, ka saar shumaca daboolka ka ilaali, ka soo saar sheyga hawada. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad shaashadda furo fure muhiim ah. Meesheeda waxaa la dhigaa gidaar ilaaliye gaar ah oo lafdhabar u ah booska. Isticmaal furaha khaaska ah (waxaad isticmaali kartaa furaha guud ee boogaha) oo ku dhaji saxanka godka ilaa saacadda ilaa iyo inta ay suunka gaadhsiisantahay meesha ugu sareysa. Haddii aad eegto daloolka shumaca, pistiska waa inuu hoosta ku sii jiraa. Doorka kumbuyuutarka, waxaad isticmaali kartaa xarig weyn, waxaa fiican inaad isku laabato dhawr jeer. Ka dib markaad dejisid, waxaad ku xiran kartaa dhejinta adiga oo gadaal ka dhigaya saxan xakameynaya.
Ma taqaanaa? Chainsaw "Friendship" ayaa magaceeda ku sharfay sannad-guuradii 300-aad ee midawga Ukraine ee Ruushka ee 1954.
Ka dib markaad xirtid, waxaad u baahan tahay inaad wax walba ku sameyso qaabka dib uga noqosho, taas oo ah, inaad soo qaadato silsilad. Daarada waxaa lagu dhejiyaa dusha, waa inay ku dhejisaa dhagaxa baabuur wadista ee haya. Daarada waxaa lagu dhejiyaa meelo khaas ah oo loogu talagalay xakamaynta iyo xajmiga. Ka dibna dhig difaac.
Sida loo kala bixinayo: dejinta qaybta goynta ee silsiladda
Sababaha ugu muhiimsan ee silsiladda sarrifka ah, waxaan burburinnay. Sida loo rakibo silsiladda on silsiladda, lagu sharxay cutubka kor ku xusan. Hadda waxaad u baahan tahay inaad si habboon u adkeyso silsiladda, oo iska hubi in aan la dhaafin.
Waxaad adkeyn kartaa silsiladda laba siyaabood: dhakhso iyo horayba. Waxaa ugu fiican in aad u fidin karto habka hore.
Haddii aad qaadato fidinta hore, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad furo naasaha dusha sare u taagaya, oo kor u qaad dhinaca geeska. Nidaam gaar ah oo ku yaal dhinaca midigta, waxaad u baahan tahay inaad adkeyso silsiladda si aad u hesho kala-bixin la aqbali karo, ka dibna kor u qaad dusha sare oo aadna adkee.
Waa muhiim! Waxaa habboon in aad xusuusatid inaad adigu geli karto silsiladda qaboobaha. Haddii aad silcinaysid silsilado kadib markaad kuleylka ka dib, ka dib marka qaboojinta, waxay burburin kartaa oo dhaawici kartaa taayirka (sida waafaqsan shuruucda fiisikiska, kuleylka kulul had iyo jeer way fidisaa).
Haddii aad isticmaasho habka deg degga ah, marka hore waxaad u baahan tahay inaad kor u qaaddo suulka kursiga suunka ah iyo furfuro. Ka dibna adkee silsiladda xadhigga gidaarka saacadda ilaa inta ay joogsato. Kadibna dib u adkee lowska garabka iyo hoos u dhig gacanta.
Si aad u eegto xiisadda silsiladda, waxaad u baahan tahay inaad xirto nidaamka jajabeed ee sawirka. Ka dibna gacanta ku qabo silsiladda dusheeda, haddii uu si haboon u shaqeeyo oo aan soodhaweyn, wax walbana waa fiican yahay. Haddii silsiladku aad u adag tahay, markaa waxay u baahan tahay in la daboolo xoogaa yar, sababtoo ah waxaa jira khatarta ah in uu qarxo inta lagu jiro hawlgalka.
Si loo fududeeyo hawsha buugaagta ee beerta, bannaanka intiisa badan waxay isticmaalaan gawaarida gadaashka ah ama gawaarida yaryar.
Ogaanshaha sida silsilad loo adkeeyay on silsilad ah kuma filna. Waxaad u baahan tahay inaad si fiican u daryeesho sawirka, ka dibna waxaad kordhineysaa nolosha silsiladda kaliya, laakiin waa habka oo dhan. Waa kuwan qaar talooyinka hawlgalka:
Si joogto ah u nadiifi marinka hawada iyo saliidda saliidda. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ku bedel shaandhada mid cusub.
Ka hor inta aanad bilaabin shaqada, mar walba hubi in dhamaan lowska iyo xidhmooyinka si adag loo xiro si aysan farsamadu u dhicin inta lagu jiro hawlgalka.
Si joogto ah u saliid rinjiyeynta, oo ha ilaawin inaad shumaca ka nadiifiso shidaalka.
Saliidayn wheel wheel. Ka dib markaad la shaqeysid silsilad, ha ilaawin inaad nadiifiso.
Saliid, xoqin oo adkee silsiladda marwalba markasta, markaa wax dhibaato ah kuma jiri doonto taayirada iyo xayawaanka.
Haddii aad isticmaashid dhammaan talooyinka kor ku xusan, qalabkaagu wuxuu socon doonaa wax ka badan muddada damaanada.